အသားတွေယားနေရင် သန်ချဆေးသောက်ဖို့လိုမလား | OnDoctor
လူကြီးက သန်ချစရာလိုလို့လား? အရေပြားယားပါတယ်ဆိုနေမှ သန်ချဆေးသောက်ခိုင်းနေတယ် ဟူသောမေးခွန်များက Ondr မှာအမေးများ၍ အမြဲဖြေနေရလေ့ရှိပါတယ်။
သန်ကောင်ကဲ့သို့ကပ်ပါးကောင်ကူးစက်မှုကြောင့် ခံစားရသောလက္ခဏာသည် အတိအကျသတ်မှတ်ချက်မရှိသော်လည်း လက္ခဏာအများစုနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ အရေပြားပြဿနာများ အရေပြားယားနာများသည် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့သော် အရေပြားရောဂါများခံစားရခြင်းသည် ကပ်ပါးပိုးကူးစက်မူကြောင့်ဟု ပုံသေပြောမရပါ။အခြားရောဂါပိုးများနှင့်လည်းဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။
အရေပြားယားယံအကွက်ထပြီးရောင်ရမ်းမှုသည် ကပ်ပါးကောင်ကူးစက်မှုရဲ့အစောပိုင်းလက္ခဏာများပင်ဖြစ်ပါတယ်။ အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းအတွင်းရှိ သန်ကောင်သည် အရေပြားယားယံမှုနှင့်ဆက်စပ်သလား ဆိုင်သလား? ဟူသောမေးခွန်းအတွက်အဖြေမှာ သန်ကောင်သန္ဓေသားလောင်းသည် အရေပြားအတွင် ဖောက်ထွင်းသွားလာသောကြောင့် ယားယံမူများဖြစ်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောသန်ကောင်များသည် အရေပြားအတွင်းတွင် သန္ဓေသားလောင်းဖောက်ထွင်းသွားလာခြင်းဖြင့် ရောဂါကူးစက်မူဖြစ်စေပါတယ်။ဥပမာ သန်ပြားကောင် နှင့် သန်လုံးကောင်။
သန်ကောင်ကြောင့်အရေပြားယားယံမှုသည် ဆင်းရဲပြီးဖွံ့ဖြိူးမှုနိမ့်ကျသောနိုင်ငံများတွင်အဖြစ်များပါတယ်။ အချို့ကပ်ပါးကောင် Leishmania သည် အရေပြားတွင်ပုံစံတမျိုးအနေနှင့်နေကာ အရေပြားရောဂါဖြစ်စေပါတယ်။ သန်ကောင်ရှိသောနေရာတွင် အရေပြားပြည်တည်နာများဖြစ်လေ့ရှိပါတယ်။
အရေပြားသန်ကောင်ပိုးလောင်းအနေဖြင့် လူ့အရေပြားဖောက်ထွင်းကာ အလွန်ယားယံသောအရေပြားအကွက်များဖြစ်စေပါတယ်။အရေပြားပြဿနာသည် အဆိုပါသန်ကောင်သွားလာမူပေါ်မူတည်၍ နေရာအနှံ့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
၅ ပတ် ၆ ပတ်ခန့်အကြာ သန်ကောင်ပိုးလောင်းသေဆုံးသည်နှင့် အရေပြားယားယံမှု သက်သာလာနိုင်ပါတယ်။ သို့သော် ယားယံမှုသက်သာစေရန် သန်ချဆေးသောက်သုံးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
အစာအိမ်နှင့်အူလမ်းကြောင်းအတွင်းသန်ကောင်များရှိပါက ဓာတ်မတည့်မှုပြဿနာများ အရေပြားအဖိန့်ထခြင်းစသည်တို့ ပိုမိုဖြစ်စေပါတယ်။ သန်ကောင်ကြောင့် ဓာတ်မတည်မြူကို ပိုမိုအားပေးကူညီရာရောက်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ဓာတ်မတည့်မှုရောဂါရှိသူတိုင်းသည် သန်ချဆေးပုံမှနိသောက်ရန်အထူးလိုအပ်ပါတယ်။
အချို့ရေမသန့်သောနေရာတွင် ရေကူးသူများသည် အရေပြားဓာတ်မတည့်မူအနေဖြင့် အဖိန့်များ ထလာတတ်ပါတယ်။အချို့သန်ကောင်သည် လူကို တိုက်ရိုက်မကူးသော်လည်း ခရု ငါး စသည်တို့မှတဆင့် လူ့အရေပြားအတွင်းဖောက်ထွင်းလာတတ်ပါတယ်။အရေပြားယားယံမူကြောင့် ကုတ်ဖဲ့ဒဏ်ရာမှတဆင့် ဘက်တီးရီးယားပိုးများလည်း ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ကုသမူအနေဖြင့် သန်ချဆေးမှန်မှန်သောက်သုံးခြင်း။ကောင်းစွာမကျက်သောအသားများစားသုံးခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ခြင်း။အစိမ်းစားမူရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်မသန့်ရှင်းသောရေကူးခြင်းရှောင်ကြဉ်ခြင်းနှင့်တကိုယ်ရည်သန့်ရှင်းမူအထူးဂရုစိုက်ခြင်းစသည့်တို့ဖြစ်ပါတယ်။အရေပြားယားယံမူသက်သာစေရန် ယားယံမူသက်သာစေသောဆေးဝါးသောက်သုံးခြင်းနှငိ့အရေပြားကုတ်ဖဲ့ခြင်းကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။အရေပြားကိုအလွယ်တကူ ကုတ်ဖဲ့ပါက ဘတ်တီရီးးပိုးများပါ ထပ်မံဝင်ရောက်ရျ် အနာကျက်ရန် မလွယ်ကူတော့ပါ။ထို့ကြောင့် သန်ချဆေးကိုအသက်၂နှစ်ကလေးငယ်မှစရျ် လူကြီးကျားမ မရွေး ၆လတကြိမ်သောက်သုံးသင့်ပါတယ်။